ကနျြးမာရေး Archives - Page 12 of 19 - ThutaSone
February 3, 2019 ThutaSone 0
” ချောင်းဆိုး တကယ်ပျောက်တဲ့ ဆေးနည်းလေး ” ​နေ့စဉ်​..ရက်​ဆက်​ချောင်းဆိုးရင်​ကျပ်​ဖြစ်​​နေတာ.ရက်​၂၀​ကျော်​​နေပီ ဖြစ်​ခါစတပါတ်​​လောက်​အထိ..​နေ့တိုင်း.​ဆေးခန်းသွားပြတယ်​ မသက်​သာဘူး..​လေပြွန်​​ရောင်​တာနဲ့.​ချောင်းဆိုးရင်​ကျပ်​တွဲဖြစ်​​တော့..​နေရဆိုး..​ဆေးနည်းမိူးစုံ.၀ယ်​​သောက်​ ဒါလဲ.မ​ပြောက်​ဘူး..ရက်​၂၀​ကျော်​လာ​တော့.လူကြီး​တွေက..စိုးရိမ်​လာလို့.အထူးကုနဲ့.ပြ​တော့.ဒီတိုင်းမဖြစ်​ဘူး.ဆိုပြီး.​ဆေးရုံသွားဖို့..စီစဉ်​​နေတုန်း.. အိမ်​ကို.ရွာကဦး​လေးအလည်​​ရောက်​တာနဲ့ကြုံ​ရောဦး​လေးက.​နေဦး ​ဆေးရုံမသွား​သေးနဲ့ဦး သ​ဘောင်္ရွက်​​ရေ​နွေးစိမ်​​သောက်​ကြည့်​စမ်းဆိုတာနဲ့ အာ့​နေ့ တ​နေ့လုးံဝင်​သ​လောက်​ သ​ဘောင်္ရွက်​ ကို​ ရေ​နွေးစိမ်​​သောက်​တာညကျ ​အိပ်​နိုင်​တယ်​ ဒါနဲ့​ရောဂါ သက်​သာတာပဲ ဆိုပြီး ​နောက်​ရက်​​တွေ ဆက်​တိုက်​​သောက်​​ပေးတာ ၅ရက်​​လောက်​​နေ​တော့ ​ချောင်းဆိုး […]
ငါးကြီးဆီဆိုတာ တူနာငါး၊ ဆာလမွန်ငါးတွေလိုမှာ Omega-3 အဆီအက်စစ်ကြွယ်ဝတဲ့ ငါးတွေရဲ့တစ်သျှူးထဲက ထုတ်ယူရရှိတဲ့အဆီတစ်မျိုးဖြစ်တယ်။ Omega-3 အဆီအက်စစ်က ခန္ဓာကိုယ်ရှိအရေးကြီးတဲ့အဂါင်္တွေရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်ကို ချောမွေ့ပြီးမြောက်စေပါတယ်။ ငါးကြီးဆီသောက်ပေးရင် ဘယ်လိုကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးတွေရနိုင်မလဲဆိုတာကို ဆက်လက်ဖော်ပြပေးပါမယ်။ ၁။ခန္ဓာကိုယ်အဆီတွေကို လောင်ကျွမ်းစေတယ်။ ငါးကြီးဆီစားပေးခြင်းဖြင့် အင်ဆူလင်လှုံ့ဆော်မှုကိုတိုးလာစေတာကြောင့် ကိုယ်တွင်းအဆီတွေကိုချေဖျက်ပေးနိုင်တယ်လို့ လေ့လာချက်အရတွေ့ရှိရပါတယ်။ ဒါကြောင့်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်သူတွေကို ငါးကြီးဆီပုံမှန်စာသုံးပေးဖို့ တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ ၂။ ဦးနှောက်ကျန်းမာရေး။ […]
ဇက်ကြောတက်ကြသူများ၊ ဇက်တောင့်တင်းခြင်း၊ ကိုယ်ငွေ့နွေးနွေးနှင့် ဖျားချင် သကဲ့သို့ ဖြစ်ပြီး ကိုယ်လက်များ လေးလံခြင်း၊ ချွေးငုပ် ခြင်းများ ခံစားရပါက သိန္ဓောဆား အနည်းငယ်မျှကို ကန်စွန်းရွက် ကြိတ်ညှစ်ရည် စပ်ပေးပါ။ ထိုဆေးရည်ကို လူကြီး ဆေးတစ်ခွက်စာ အတွက် ဟင်းစာ စတီးဇွန်းနှင့် တစ်ခွန်းကို နံနက် တစ်ကြိမ်၊ […]
ဘီပိုး စီပိုး သမားတွေ အပြင် မြွေဆိပ်ပါနိုင်တဲ့ သခွပ်ပင်အကြောင်း
January 31, 2019 ThutaSone 0
အဆိပ်အားလုံးရဲ့ဖြေဆေး (သခွပ်ပင်) မြွေဆိပ်နိူင်တဲ့ ဟင်းငုတ်ပင်(မေတ္တာဖြင့် တောင်ကြီးသား) ဟင်းငုတ်ပင်ကိုဒေသအလိုက်သခွပ်ပင် ဟင်းဂုတ်ပင် ဟင်းဂွတ်ပင်ဟု ခေါ်ကြသည်။ တစ်နိုင်ငံလုံးပေါက်သည်။ နှစ်ရှည်ပင်ကြီး။ ပင်စည်တွင် အခေါက် အပွေးမရှိ။ အရွက်အနည်းငယ်ဝိုင်း။အပွင့်အဖြူရောင်။ပဒိုင်းပွင့်နှင့်တူသည်။ တန်ခူးမှဝါဆိုလအထိပွင့်သည်။အသီးမှာသေးသေးရှည်ရှည်။နှစ်ပေခန့်ရှိ။ ဆေးဘက်ဝင်ဝင်ပုံ အခေါက် ၁။ မြွေပွေး။မြွေဟောက်ကိုက်ခံရပါကအခေါက်ကိုအမြန်ဝါးစားလိုက်ပါလျှင် အဆိပ်မရှိတော့ပါ။ငန်းတော်ကျား။ငန်း မြွေ အပါအဝင်ပါ။ (မြွေပွေးနှင်မြွေဟောက်သာအကိုက်ခံသူရှိ၍ဦးစားပေးဖေါ်ပြရခြင်းပါ) ၂။ […]
” ကျောက်ကပ်မှာ ရှိနေတဲ့ ကျောက်တွေကို ချေဖျက် နိုင်တဲ့ အပြင် ဆီးပူတာတွေ ဆူးအောင့်တာတွေ ကို ယူပြစ် လိုက်သလို သက်သာ ပျောက်ကင်းစေနိုင်သည့် ကျောက်ကပ်ပင် (သို့) အရိပ်မထွက်ပင် “
January 30, 2019 ThutaSone 0
မြေမှာ ကပ်ပေါက်၍ အရွက်ဖါးဖါး လိပ်ပြာတောင်ပံကဲ့သို အပင်ခြေတွင် ဥများ ကပ်လျှက် ရှိပါသည်။ တောတောင်ထဲတွင် မိုးတွင်းရောက်မှသာ အပင်အစို့ ကလေးများ စတင်ထွက်တတ်ပြီး ၎င်းပေါက်သော နေရာမှလွှဲ၍ အခြားနေရာတွင် မပေါက်ပါ။ မိုးတွင်းရောက်ပါက ၎င်းအပင်တွေ့ရှိသော နေရာတွင် ရှာပါက ပြန်လည်ပေါက်ရောက်နေသည် ကိုတွေ့ရှိရပါသည် ။ မြေမှာ […]
January 28, 2019 ThutaSone 0
ဒီရာသီဆို ကျမတို့ဆီမှာ လိမ္မော်သီးတွေ လှိုင်လှိုင်စားရပြီဆိုတော့ ဈေးကနေ တရုတ်ကဝင်တဲ့ ပျားလိမ္မော်လေးတွေ ဝယ်လာဖြစ်တယ်။ အိမ်ရောက်တာနဲ့ ရေအမြန်ဆေးပြီး ရေခဲသေတ္တာထဲ အေးအေးလေး စားရအောင် ထည့်ထားပြီး ခနနေအမောပြေလေး တစ်လုံး ထုတ်စားလိုက်တယ်။ အခွံမခွာခင် အခွံပေါ်မှာ အဖြူဖတ်လေးတွေတွေ့လို့ နောက်တကြိမ် ရေထပ်ဆေးဖြစ်တယ်။ တစ်လုပ်စာလေးမို့ တခါထဲ ဝါးစားလိုက်ပြီး […]
( က ) ဆီချိုးရောဂါသမားအတွက် လက်ပံပွင့်ကိုပြုတ်စားပါ။လက်ပံပွင့်ကိုဟင်းချိုချက်စားပါ။ ဆီချိုရောဂါသမားအတွက်ဆေးကောင်းတစ်လက် ( ခ ) သွေးတိုးရောဂါသမားအတွက် ဇီးသီးနဲ့လက်ပံပွင့်ရောပြီးဟင်းချိုချက်စားပါ။သွေးတိုးရောဂါပျောက်ကင်းစေသောဆေးတစ်လက် ( ဂ ) မီးယပ်​ရောဂါသမားအတွက် လက်ပံအခေါက်ပြုတ်ပြီးသောက်ပါ။သွေးဆုံမီယမ်အမျိုးသမီးဆေးကောင်းတစ်လက်​ ( ဃ ) လေးဖက်နာသမားအတွက် လက်ပံပင်အမြစ်ကိုသွေးပြီးသောက်ပါ။ပြီးလျှင်ခြေဆစ် လက်ဆစ်ကိုလိမ်းပေပါ။ လေးဖက်နာရောဂါ'( ၃ ) […]
January 27, 2019 ThutaSone 0
ဒီဆောင်းပါးလေး ဟာ အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ ကျန်းမာရေး နဲ့ ပက်သက်တဲ့ ဆောင်းပါးလေးပါ။ ထမင်းစားပြီးတိုင်း ရေနွေးသောက်ဖို့သတိပေးတာ တစ်ခုတည်း မဟုတ်ပဲ နှလုံးခုန် ရုတ်တရက် ရပ်တန့် စေတဲ့ရောဂါကိုလဲ သတိပေးရာ ရောက်ပါတယ်။ တရုတ်လူမျိုး နဲ့ဂျပန်လူမျိုး […]
ည ညဆို အိပ်ရေးပျက်အောင်ဆိုးတဲ့ချောင်း ဒီနည်းနဲ့ဖြေရှင်းလိုက်ပါ
January 26, 2019 ThutaSone 0
ည ညဆို အိပ်ရေးပျက်အောင်ဆိုးတဲ့ချောင်း ဒီနည်းနဲ့ဖြေရှင်းလိုက်ပါ ချောင်းအရမ်းဆိုးပီး ရင်ကြပ်တဲ့သူတွေအတွက် ​ငွေကုန်​​ကြေးကျ သက်​သာပြီး တကယ်​​ပျောက်​တဲ့နည်း လိုအပ်​ရင်​ Shareထားပါ .ကိုယ်တိုင်လဲ တပတ်လောက်ချောင်းဆိုးလို့ ဒီနည်းလေးနဲ့ပျောက်ခဲ့တာလက်တွေ့ပါပဲ။ အလွယ်ကူဆုံး သဘာဝနည်းလမ်းလေးကို ဝေမျှပါရစေ.. အရမ်းလွယ်ကူပီး ငွေကုန်သက်သာစေမယ့်နည်းလေးပါ။ ပါဝင်တဲ့ ပစ္စည်းကတော့.. လိမ္မော်သီး သို့မဟုတ် ကဗ္ဗလာသီး သို့မဟုတ် […]
ခါးနာ၊ အရိုး အဆစ်မြစ်တွေ ကိုက် တာ ဘယ်တော့ မှ ပြန်မဖြစ်တော့တဲ့ ဆေးနည်း
ခါးနာဝေဒနာကို ခံစားနေရပါသလား..? နဲနဲလေးအအေးခံလိုက်တာနဲ့ အရိုးအဆစ်မြစ်တွေ တစ်ဆစ်ဆစ်ကိုက်ခဲတာမျိုးတွေ ဖြစ်နေပါသလား..? အခုဖော်ပြမယ့် နည်းလမ်းလေးကို သုံးကြည့်လိုက်ရုံနဲ့ ဒီဝေဒနာတွေအားလုံး ယူပစ်သလို ကင်းစင်သွားပါလိမ့်မယ်။ ခါးနာ၊ အရိုးအဆစ်တွေ ကိုက်တတ်လို့ ဆရာဝန်သွားပြရင် ဆရာဝန်တွေ အားလုံးက ဒီပြဿနာဟာ အနေအထိုင် ကိုယ်နေဟန်ထား မမှန်ကန်လို့ ဖြစ်တာ၊ ဘယ်လိုနေ ဘယ်လိုထိုင် […]